၂၀၂၁ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၁ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ့မီးရထားဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒဖော်ထုတ် ကာ CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်လာစဉ် / ဧရာဝတီ
စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသည့် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဝင်များကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း မပြုဖို့ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရေးရာအဖွဲ့ (ILO) က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်မှ စ၍ စစ်အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရပြီးနောက်တွင် နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများက စစ် အစိုးရလက်အောက်တွင် တာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းနှင့် အလုပ်မဆင်းပဲ သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ လမ်းပေါ် ထွက် ဆန္ဒပြခြင်းများ ပြုလုပ်နေရာ အချို့ ဌာနဆိုင်ရာများက အလုပ်မဆင်းသည့် ဝန်ထမ်းများကို ခြိမ်းခြောက် ခြင်း၊ အဓမ္မအလုပ်ပြန်ဆင်းခိုင်းခြင်းများ ရှိနေသည်။
ထိုအခြေအနေများကို ပြည်တွင်းမှ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများက ILOထံသို့ အစီရင်ခံစာ တင်ပြလာသဖြင့် အရပ်သားအစိုးရ အုပ်ချုပ်မှု ပြန်ရရေးတောင်းဆိုမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသည့် အလုပ်သမားများကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ကြိမ်းဝါးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် ထုတ်ပြန်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Guy Ryder က “ လူ ၅ဦးထက် ပိုသော စုဝေးမှုများအား ကန့်သတ်သည့် အမိန့်ကို ချက်ချင်း ဖယ်ရှားပေးရန်၊ ဆန့်ကျင်ဘက် အသံများအပေါ် ဖိနှိပ်မှုကို ရပ်တန့်ရန် အလုပ်သမားများ၏ အခြေခံ အခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို အပြည့်အဝ လေးစားလိုက်နာရန် စစ်တပ်ကို တောင်းဆိုသည်”ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံတဝှမ်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် အခြားအလုပ်သမားများကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းများကိုလည်း မပြုလုပ်ရန်လည်း Mr. Guy Ryder က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ILO အဖွဲ့ဝင် တနိုင်ငံဖြစ်ကာ နိုင်ငံအနေဖြင့် ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် အကာအကွယ်ပေးရေး ဆိုင်ရာ ၊ ၁၉၄၈၊ ပြဌာန်းချက် အမှတ် ၈၇ ကိုလည်း လေးစားလိုက်နာရန် လိုအပ်သည်ဟု ILO၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ စတင်ပြုလုပ်စဉ် သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်ထက် က ILO တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ပြဌာန်းချက် အမှတ် ၈၇ ကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် အနေဖြင့် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ဥပဒေ တရပ်ကို ရေးဆွဲကာ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တို ဘာက ပြဌာန်းအတည်ပြုထားသည်။
ယခုအခါ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း သပိတ်မှောက်သည့် အနေဖြင့် “Civil Disobedience Movement-CDM ”တွင် ပါဝင်သည့် သူများကို အလုပ်ပြန်ဆင်းရန် ဖိအားပေးခြင်းများ ရှိသည့် အပြင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်၊ ညပိုင်းကလည်း CDM တွင် ဦးဆောင်ပါဝင်နေသည့် ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲများကို ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက လိုက်လံ ဖမ်းဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်နေ သည်။
CDM ကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်နေသည့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ မကွေးတိုင်းအတွင်းမှ ဆေးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများ၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများကိုလည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် ညပိုင်းက ဆေးရုံများ၊ အိမ် များတွင် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများက ဖမ်းဆီးမခံဘဲ လူရာနှင့်ချီ ဝိုင်းလာသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များက ပြန်သွားခဲ့ရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၊ လေရှီးမြို့နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော် မြို့နယ်တို့မှ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများသည်လည်း CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်နေသဖြင့် ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သည်ဟု ဆိုကာ အလုပ်တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ လစာကို တဝက်နှုန်းသာ ခံစားခွင့် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ရုံးအမိန့်ကြေငြာစာများ ထုတ်ထားသည်။
အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် CDM ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ ယန္တရား မလည်ပတ် နိုင်ပဲ ရပ်တန့်သွားစေရန် ရည်ရွယ်ကာ လူထုမှ မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ထားသည့် ရွေးကောက်ခံ အစိုးရကို ပြန်လွှတ် ပေးမှသာ ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဟု ပြောဆိုထားကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်ကလည်း စစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရ ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ၊ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က အစိုးရဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မသမာသူများ၏ လှုံ့ဆော်စည်းရုံးမှုများကို နားမယောင်ပဲ ဝန်ထမ်းတာဝန်ကျေပွန်ရန် အလုပ်ပြန်ဆင်းကြရန် ထည့်သွင်း ပြောဆိုထားသည်။
Topics: စစ်ခေါင်းဆောင်, စစ်အာဏာရှင်, တပ်မတော်, အလုပ်သမား